Barcelona Oo Lumisay Kaalintii Ay Kaga Jirtay Saxiixa Matthijs De Ligt Iyo Kooxaha Premier League Oo Warkii Ay Sugayeen Helay. - Gool24.Net
Barcelona Oo Lumisay Kaalintii Ay Kaga Jirtay Saxiixa Matthijs De Ligt Iyo Kooxaha Premier League Oo Warkii Ay Sugayeen Helay.
Kooxda Barcelona ayaa doonaysay in ay todobaadkan dhamaystirto saxiixa heshiiska kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs De Ligt laakiin war cusub ayaa ka soo baxay.
Barcelona ayaa booska ugu fiican kaga jirtay in ay la wareegto difaaca dhexe ee Ajax ee Matthijs De Ligt kaas oo ay saf dheer ugu jiraan kooxaha Yurub ugu waa wayni laakiin hadda sheekada ayaa isbadashay mana jirto fursad ay Barca hadda dheer tahay kooxaha kale.
Wargayska Sport ee magaalada Barcelona ka soo baxa ayaa shaaciyay in ay Barcelona lumisay maamulkii ay ugu gacanta saraysay tartanka loogu jiro Matthijs De Ligt.
Sida uu wargayska Sport shaaciyay, Barcelona ayaa doonaysay in ay todobaadkan dhamaystirto heshiiska Matthijs De Ligt inta aanu la midoobin ciyaartoyda xulka qarankiisa Holland ee tartanka UEFA Nations League.
Wargayska Sport ee magaalada Barcelona ka soo baxa ayaa warkan ku shaaciyay boggiisa hore iyaga oo soo qaatay sawirka madax wayne Bartomeu iyo Matthijs De Ligt
Laakiin waxay Barcelona awoodi kari wayday in ay dhamaystirto heshiiskii ay Matthijs De Ligt la gaadheen bishii April iyada oo la sheegay in hadda Barcelona ay saxiixa De Ligt iskugu mid yihiin kooxaha kale ee Yurub.
In Barcelona ay ku fashilantay dhamaystirka heshiiska Matthijs De Ligt ee xiliga hore waxay albaabka u furaysaa kooxaha Premier league ee Man City, Man United iyo Liverpool oo dhamaantood lala xidhiidhinayay 19 sano jirkan reer Holland.
Kooxaha Juventus iyo PSG ayaa sidoo kale ah kooxo xiisaynaya saxiixa Matthijs De Ligt taas oo keeni karta in Barcelona ay ka shalayso go’aanka ay hore ugu dhamaystiri kari wayday saxiixa De Ligt.
Warar hore oo soo baxay ayaa sheegayay in Matthijs De Ligt uu lacag badan oo mushaar ah uu dalbaday laakiin kooxaha Premier league ayay isku dayi doona in ay Barcelona ka dul qaadaan saxiixa kabtanka Ajax ee De Ligt.
Matthijs De Ligt ayaa xili ciyaareedkan wacdaro ka soo dhigay horyaalka Holland iyo Champions League iyada oo loo doortay xidigii sanadka ee horyaalka Holland ugu fiicnaa.
Markii hore Matthijs De Ligt ayaa la filayay in uu saaxiibkiisa Frenkie De Jong kula midoobo Camp Nou balse hadda wararka ayaa shaki xoogan galinaya rajadii ay Barcelona dheerayd kooxaha kale.